मेरो श्रीमान्लार्इ कसरी जीवित बनाउने होला ?
दाहसंस्कार गरि मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र दिइएको मानिस जीवितै फर्केर पुनः बिवाह
तीतोपाटी डट कम - ‘मेरो श्रीमानलाई कसरी जीवित बनाउने होला ?’ पतिको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र दराजबाट निकाल्दै सन्तोषीले सोधिन् । श्रीमतीको प्रश्न सुनेर छेवैमा बसेका उनका श्रीमान् सुवास तामाङ मुस्कुराए । सुवास जीवित छन्, त्यसैले मुस्काउँछन्, तर कानूनी रुपमा उनी मरिसकेका छन् । त्यसैले उनको साथमा आफ्नै मृत्युको प्रमाणपत्र पनि छ । पतिको मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र हातमा बोक्ने महिलामध्ये सन्तोषी त्यस्तो भाग्यमानी महिला हुन्, जसको साथमा श्रीमानको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र सँगै सुखदुःखमा साथ दिने श्रीमान् पनि छन् । साउदी र नेपाल सरकारबाट मृत्यु भइसकेको प्रमाणपत्र पाएका उनका श्रीमान् अब कानूनी रुपमा कसरी जीवित होलान त ? सन्तोषी मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र हेर्दै छक्क पर्छिन् ।
मोरङको बेलबारी नगरपालिकाको लक्ष्मीमार्गकी सन्तोषी तामाङको प्रश्न सुन्दा जसलाई पनि अचम्म लाग्छ, तर प्रश्नभन्दा धेरै अचम्मलाग्दा अनुभव भोग्दै सन्तोषीको जिन्दगीको रथ पनि अघि बढ्दैछ । कमाउन गएका श्रीमान् गुमाउनु, विधुवा हुनु, फेरि त्यही श्रीमान् जीवित भएर फर्किदाका उनका भोगाइ एकादेशका कथा जस्तै छन् । सन्तोषीलाई पनि आफ्नो भोगाई संसारका मानिसका भन्दा फरक लाग्छन् । सन्तोषीका श्रीमान् सुवास साउदी गएको १ वर्षमात्र भएको थियो । भोजपुरको कुदाक काउले स्थायी घर भएका सुवास मोरङमा बसाईं सर्दाको साढे सात लाख रुपैयाँ ऋण तिर्नका लागि २०७१ सालमा साउदी उडेका थिए ।
सुवास साउदीमा हेभी हुण्डाई कम्पनीमा काम गर्थे । उनको काम र कमाई राम्रो थियो । वर्ष दिन बितेपछि उनी घरविदामा मोरङ आए । दुई महिनाको छुट्टिमा घर बसे । त्यसपछि सुवास २०७२ जेठमा फेरि साउदी फर्किए । घर विदाबाट भर्खरै फर्किएकाले सुवासले पहिले जस्तो घरमा नियमति फोन गर्दैन थिए । महिना नमरेकाले तलब आएको थिएन । फ्रि कलको अफर पाएको बेला सन्तोषी र सुवास सबै कुरा गरी भ्याउँथे ।
सुवास घरबाट विदा भएको एक महिना पनि पूरा भएको थिएन । जेठमा फर्किएका सुवासको बारेमा असार २४ गते सन्तोषीले नसोचेको खबर आयो । सन्तोषी नजिकैको पसलमा मासु किन्न गएकी थिइन् । मासु पसलमा उभिइरहेकी सन्तोषीको फोन बज्यो । फोनको घण्टीसँगै आएको खबर सन्तोषीको जीवन उथलपुथल पार्ने किसिमको थियो । खबर थियो, रोजगारीका लागि साउदीमा भएका उनका श्रीमान् सुवास दुर्घटनामा परेको ।
सन्तोषी त उनै श्रीमानको फोन कुरिरहेकी थिइन । शुक्रबार २४ गते दुर्घट्नामा परेका श्रीमानसँग सन्तोषीको बुधबार कुराकानी भएको थियो । आइतबार र बुधबार फ्रि कलको अफर पाउने भएकाले सुवासले सन्तोषीलाई आइतबार फोन गर्छु भनेका थिए । सुवासले शुक्रबार तलब आएपछि घर पैसा पठाउँछु पनि भनेका थिए । सन्तोषीलाई फोनमा भनेजस्तै सुवास महिनाभरीको तलब लिएर त्यो दिन काम गर्ने ठाउँ हुण्डाईबाट घरमा पैसा पठाउन बैंक गए । तर साउदीमा त्यो दिन चाड परेकाले उनले घरमा पैसा पठाउन पाएनन् ।
आइतबार फोन गर्ने उनको बाचा पनि पूरा भएन । पैसा पठाउन नपाएपछि कम्पनी फर्कदै गर्दा सुवास बाटोमै दुर्घट्नामा परे । साउदीमै काम गर्ने सन्तोषीका साईंला देवरले उनलाई त्यही खबर दिएका थिए । सबैले मृत्युको खबर पाए पनि सन्तोषीलाई पूरा खबर दिइएको थिएन । तर पसलबाट घरमा पुग्दा सबैजना भेला भएका थिए । यो देखेपछि सन्तोषीलाई पनि श्रीमान् मरेको अनुमान लाउन धेरै बेर लागेन ।
श्रीमानको सदगतपछि सन्तोषीलाई सम्हालिन गाह्रो भयो । सन्तोषीको अवस्था देखेर परिवारले बाँच्ने छाँटकाँट देखेका थिएनन् । श्रीमानको मृत्युको खबर सुनेदेखि होसमा भन्दा धेरै बेहोसीमै बिताएकाले सन्तोषीलाई भने धेरै कुरा याद छैनन् । बेलाबेलामा होसमा आउँदा परिवारका सदस्यले कुरा गरेको उनी सम्झन्छिन् । ‘ससुराले त मरेको सँगै गाडौंला भनेको सुनें । अनि चाहिँ उठ्नुपर्छ जस्तो लाग्यो तर सकिन,’ सन्तोषीका आँशु गालाको डिल हुँदै घाँटीसम्म पुगे । उनी त्यो क्षण अझै सम्झिन्छिन्, ‘घर भित्र लडिरहेकीे थिएँ । तेरो सिन्दुर पोते त गयो छोरी, खै दे त भने, त्यसपछि बेहोस भएछु,’ सिन्दुर पुछिँदाको त्यो पल सन्तोषीलाई चटक्कै बिर्सन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अहिले पनि ।
श्रीमान् बितेपछि उनकोे जीवनमा न टेक्ने लौरी बाँकी रह्यो न समाउने हाँगो । घर बनाउँदाकोे ऋण र दुई सन्तानको जिम्मेवारी उनकै काँधमा आयो । उनको घरमा बिहानदेखि बेलुकासम्म साहु पालैपालो आउँथे । सबैकुरा एकैपटक आइलागेपछि उनले बाँच्ने र गरिखाने आँट जुटाउन सकिनन् । उनलाई आँखा बिना संसार हेर्न सकिन्न जस्तो लाग्यो । मुटु बिना सास रोकिन्छ जस्तो लाग्थ्यो । त्यसैले मन भुलाउन सन्तोषीले रक्सीको साहारा लिन थालिन् । ‘छोराछोरीलाई दाजुभाइ र आमालाई ५ वर्ष पालिदिनु भनेकी थिएँ । मलाई त बाँच्छु भन्ने नै लाग्दैनथ्यो । रक्सीको ग्यालेन लिएर म खोलाको छेउमा रुँदै दिन बिताउँथे,’ सन्तोषी छोरी सविताको कपाल सुमसुम्याउँछिन् । अनि बोलिन्, ‘मैले त सबैलाई मेरो भर नपर्नु भनेकी थिएँ ।’
उनको तीन महिने बिधवा जीवन श्रीमानसित बिताएका क्षण सम्झेर बिते । अहिले तिनै श्रीमानको साथमा बसेर यी कुरा सुनाउँदा उनलाई नमिठो सपना जस्तो लाग्छ । उनी कसैले नभोगेको मैले भोग्नुपर्ने भनेर भाग्यलाई धिक्कार्छिन् । सन्तोषी दिनरात यसरी नै कटाइरहेकी थिइन् । तर तीन महिना पछि फेरि पत्याउनै नसकिने अर्को खबर आयो । यो पालि पनि पहिले जस्तै उनको फोनको घण्टिले अनौठो खबर ल्यायो । ‘माइजु मामा त जिउँदै छन अरे,’ उनलाई भान्जे बुहारी रितु तामाङले यो अपत्यारिलो खबर सुनाइन् ।
मरेका श्रीमान जीवित छन भनेर सुन्दा सन्तोषीको खुसीको सीमा थिएन । उनले आफूलाई भाग्यमानी ठानिन् । अर्कातिर मन पीडाले पोल्न थाल्यो । मनमा आउने प्रश्नले सन्तोषीलाई दिनरात घोच्न थाले । ‘मेरो हातका चुरा कस्का नाममा फुटे, पोते कस्का लागि चुँडियो ? मेरो सिउँदोको सिन्दुर कस्का लागि पखालियो ? मेरो बुढो जिउँदो हुँदाहुँदै कसको घेवा (सदगतसँगै अन्तिम संकार) गरें जस्तो लाग्यो । रातभर निन्द्रा लागेन,’ सन्तोषीका अनुहारका रंग फेरियो । अघिदेखि सुँक्सुकाइरहेकी सन्तोषीको रुवाइको आवाज ठूलो भयो ।
आफ्नै श्रीमानको पासपोर्ट, साउदी सरकारले जारी गरेको मृत्युको प्रमाणपत्र सहित आएको शव जलाएकी सन्तोषीलाई त्यतिबेला कुनै फिल्म हेरिरहेको छु कि झैं लाग्यो । उनलाई श्रीमान् जीवित हुँदाहुँदै कसका लागि सुन्दुर पखालें, पोते चुडाएँ, चुरा फुटाएँ भन्ने प्रश्नले मनमा खुल्दुली मच्चायो । श्रीमान् जीवितै भेटिनुको वास्तविक कारण उनले पछि मात्र थाहा पाइन् ।
बैंकमा पैसा हाल्न जाँदा सुवाससहित हुण्डाई कम्पनीका चार जना नेपाली कामदार गएका थिए । बैंकमा काम नहुने देखेपछि फर्किएका उनीहरु बाटोमै दुर्घट्नामा परे । उनीहरु चढेको ट्याक्सी चलाउने बाग्लुङ घर भएका तेजेन्द्र भण्डारी थिए । पाँच जना दुर्घट्नामा परेका मध्ये चार जनाको भोलिपल्टै मृत्यु भएको अस्पतालले घोषणा ग¥यो । मृत्यु हुनेमा सुवास पनि थिए । त्यसैले कम्पनीले सुवासको शव पनि नेपाल पठाएको थियो । ट्याक्सीचालक तेजेन्द्रको भने उपचार भइरहेको थियो ।